ဆီး ချို အတွက် ကောင်းမွန် တဲ့အပြင် ငှက်ပျောဖူး စားပေးခြင်း ရဲ့ အကျိုးကျေး ဇူးများ – Shwewiki.com
January 26, 2020 By admin Knowledge
ကျွန် မငယ်ငယ်တုန်းကဆို မေမေက ငှက်ပျောဖူး မကြာခဏဆိုသလို ချက်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ သိပ်ကိုအရသာရှိပြီး စားကောင်းလွန်းလို့ အသားနဲ့တောင် မလဲနိုင်ပါဘူး … ။ အခုတော့ အိမ်နဲ့ဝေးနေတာကြာပြီမို့ ငှက်ပျောဖူး ကိုစားချင်တိုင်း ဆိုင်တွေမှာ ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်စားနေရပြီပေါ့ရှင် …. ။
စာဖတ်သူတို့ကော ငှက်ပျောဖူးကို စားဖူးကြလား။ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ငှက်ပျောဖူးဟင်းလျာကို ထည့်သွင်းရောင်းချကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ငှက်ပျောဖူး ဟာ အရသာရှိရုံသာမက ကျန်းမာရေး အတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ဖို့ အတွက် ဆေးဝါးတွေကို အထူးတလည် မှီဝဲစရာ မလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အခြေခံအရင်းအမြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် .. ။
ဒီတော့ ငှက်ပျောဖူးစားတာ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိသလဲ … ။
(1) သွေးအားနည်းရောဂါကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ် … ။
(2) အစာအိမ်နာတာကို သက်သာစေပါတယ် … ။
(3) ဆီးချိုရောဂါ ဝေဒနာရှင်တေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေ အတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ် … ။
(4) အမျိုးသမီးတွေ အတွက် လစဉ်ဓမ္မတာ မှန်စေပါတယ် … ။
(5) ကျောက်ကပ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ် … ။
(6) ၀မ်းချုပ်တာကိုလည်း လျှော့ကျစေပါတယ် … ။
(7) ဒါ့အပြင် သားအိမ်ကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေလို့ သားအိမ်ကျတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး … ။
(8) သွေးတိုးလည်း ကျစေပါတယ် … ။
“ဆီးခြိုအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့အပွငျ ငှကျပြောဖူးစားပေးခွငျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား”
ကြှနျမငယျငယျတုနျးကဆို မမေကေ ငှကျပြောဖူး မကွာခဏဆိုသလို ခကျြကြှေးလရှေိ့ပါတယျ။ သိပျကိုအရသာရှိပွီး စားကောငျးလှနျးလို့ အသားနဲ့တောငျ မလဲနိုငျပါဘူး … ။ အခုတော့ အိမျနဲ့ဝေးနတောကွာပွီမို့ ငှကျပြောဖူး ကိုစားခငျြတိုငျး ဆိုငျတှမှော စြေးကွီးပေးပွီး ဝယျစားနရေပွီပေါ့ရှငျ …. ။
စာဖတျသူတို့ကော ငှကျပြောဖူးကို စားဖူးကွလား။ တိုငျးရငျးသားရိုးရာ စားသောကျဆိုငျတှမှော ငှကျပြောဖူးဟငျးလြာကို ထညျ့သှငျးရောငျးခကြွတာပဲဖွဈပါတယျ … ။ ငှကျပြောဖူး ဟာ အရသာရှိရုံသာမက ကနျြးမာရေး အတှကျ မြားစှာ အထောကျအကူပွုတာပဲဖွဈပါတယျ … ။
ကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျဖို့ အတှကျ ဆေးဝါးတှကေို အထူးတလညျ မှီဝဲစရာ မလိုပါဘူး။ ကြှနျမတို့ နစေ့ဉျစားသုံးနတေဲ့ အစားအစာတှဟော ကနျြးမာပြျောရှငျခွငျးရဲ့ အခွခေံအရငျးအမွဈတှပေဲဖွဈပါတယျ .. ။
ဒီတော့ ငှကျပြောဖူးစားတာ ဘယျလို အကြိုးကြေးဇူးတှရှေိသလဲ … ။
(1) သှေးအားနညျးရောဂါကို ကုသပေးနိုငျပါတယျ … ။
(2) အစာအိမျနာတာကို သကျသာစပေါတယျ … ။
(3) ဆီးခြိုရောဂါ ဝဒေနာရှငျတနေဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှေ အတှကျ အထူးကောငျးမှနျပါတယျ … ။
(4) အမြိုးသမီးတှေ အတှကျ လစဉျဓမ်မတာ မှနျစပေါတယျ … ။
(5) ကြောကျကပျရဲ့ လုပျဆောငျမှုကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ … ။
(6) ဝမျးခြုပျတာကိုလညျး လြှော့ကစြပေါတယျ … ။
(7) ဒါ့အပွငျ သားအိမျကိုလညျး ကွံ့ခိုငျစလေို့ သားအိမျကတြာ မဖွဈနိုငျပါဘူး … ။
(8) သှေးတိုးလညျး ကစြပေါတယျ … ။